Wallpaper 17 ho an'ny geeks, geeks, nerd na mpankafy teknolojia | Avy amin'ny Linux
Araka ny efa fantatrao ... Izaho no karazan'olona tia manangona sary an-tsary (napetrako ny maro, haha) ... ary tsy nisy, nanapa-kevitra ny hizara sary an-tsary maro heveriko fa ho tianao ianao 😀
Raha ny marina, mampiasa ny Atsaharo ny fanaingoana, manomboka miasa ????
Eny, antenaiko fa tianao izany ary ... tratry ny herinandro ho an'ny rehetra 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » famolavolana » Wallpaper 17 ho an'ny geeks, geeks, nerd na mpankafy teknolojia
Fanangonana mahafinaritra ...
Misaotra, manao izay vitanao ianao 🙂
+ 100 Tiavo izy rehetra! Tena tsara ireo, heveriko fa hanao downthemall amin'ireo sary an-tsary ireo aho, manana endrika tsara dia tsara izy ireo, namana KZKG ^ Gaara, ary tena marina fa tsara kokoa ny mijanona tsy manamboatra azy ary manao ny tsindry hahaha.
haha tsara be ry zareo xD raisiko daholo izy rehetra 😛
Misaotra naneho hevitra 😀
Wallpaper tsara inona 😀 Nijanona tamin'ilay iray voafantina tamin'ny kolontsaina manerantany aho hahaha, misaotra
Misaotra anao ^ - ^
Mahafinaritra ny mahafantatra fa tian'izy ireo izy ireo hahaha.
efa misy 2 amintsika no tia ny «Miasa amin'ny tahiry»
tsara daholo izy rehetra. manohana !!!
Tena tsara, mandray maromaro aho 😀
Tsara izy ireo! (Na dia mihoatra ny sasany amin'ireo disto aza, na dia avy any Debian xD aza). Azo antoka fa ho tsara kokoa izy ireo rehefa ao amin'ny .png rehetra-🙂
Ankehitriny, tsy miaiky aho fa tsy azoko ilay ho an'ny 127.0.0.1. Azonao hazavaina amiko ve izany?
127.0.0.1 dia midika hoe solosainao manokana. Ny IP an'ny localhost, izany hoe, ny wallpaper dia midika fa: «tsy misy toerana toa ny solosaintsika manokana» ... fa amin'ny fomba somary mitebiteby kokoa 😀
ha! Misaotra tamin'ny mailaka Rta! Hitako be frezy kokoa io noho ny geek fa openmind izahay ha! fiarahabana
Tena tsara na dia ny teny nerd aza dia zavatra manafintohina nefa mitovy xD
Mamaly an'i VInce
manafintohina? ... tsara fa mihevitra ny tenako ho nerd LOL !! aho, ary koa fantatro fa maro eto no mihevitra ny tenany ho mitovy 😀
Hahaha rehefa antsoin'izy ireo hoe nerd aho dia somary mendri-piderana.
Miankina amin'ny tonony na ny fomba voalaza azy, ary koa iza no milaza azy 😀
Nidina an-daharana daholo aho .. hehehe .. Misaotra betsaka ..
Ny tsara indrindra: ny lesoka voalohany 404 .. hehe ..
Ary eny hehe ... ny 1 amin'ny 404 dia tsara, tena ny tena tiako indrindra dia ilay loko manga ao aorinan'io 🙂
Fanangonana tena tsara, mitazona aquamatrix sy binary. Misaotra anao.
Hehe, tiako ilay teo amin'ny fiasa sy ny MySQL, napetrako tao ambadika tao amin'ny terminal 😛 Thx!
Tsy dia tiako loatra ny MySQL, aleoko ny faha-8 🙂
Wtf? Efa ela aho no nitady rindrina n'aiza n'aiza. Fialamboliko ihany koa ny misintona fonosana HD amin'ny vahaolana azoko sy manasokajiana azy ireo, entiko miaraka amiko izy ireo, tena tiako ilay birao faha-2, 127.0.0.1 ary faha-2 404 tsy hita hahaha. Izy ireo dia mifangaro tsara amin'ny biraoko, efa ela aho no nitady an'ity karazana sary an-tsary ity.
Raha hitanao ny fanangonana sary an-tsehatra lehibe ananako ... HAHAHA, jereo eto aho nametraka maromaro izay mendrika izany: http://artescritorio.com/author/kzkg-gaara/
Lehilahy! Eny, efa telo izahay. Nieritreritra aho fa tamin'ny fotoan'ilay horonantsary dia izaho irery no tia nisintona ny sary mihetsika. Hitako fa tsy irery aho. 🙂
sary mihetsika mahafinaritra, misaotra!
Edux099 dia hoy izy:
Hovako ny lakilen'ny w-asd ho an'ny hjkl (vim keybinding), hahaha.
Mamaly an'i Edux099
Raisiko izy rehetra, tena tsara izy ireo, misaotra nizara
Raisiko ny fangatahana MySQL momba ny fonon'ny facebook-ko
Napetrako fotsiny ilay ho an'ny fiasa hehehe
Tiako izy ireo, ny matrice sy ny kaody fampiasa, anaovako azy ireo. Misaotra anao
Miala tsiny fa niverina tamin'ilay binary aho. mahafaly
Tsara izy ireo. Misintona… !!
Tiako ireo manana kaody. Toy izao aho. 🙂 Na dia tsy ratsy aza ny an'i MAN-WOMAN-GEEK. 🙂
Eny, liana ilay iray fa toy ny sary an-tsary tsy hitako hoe manintona toy ny hafa 🙂
Na ny vehivavy-geek aza apetrako ho lasa ambadika, fa ny namako tsy mahalala ny voambolana, ka hoheverin'izy ireo fa "hafahafa" izany hahahahaha ..
Ary marina ny azy ireo. Avoahy ny tratranao ary ataovy amin'ny avonavona. TPT! 🙂
Uhh, malahelo an'ilay iray ianao tamin'ny "life.sh" izay tamin'ny lahatsoratra teo aloha ary nanana fotoana be aho.
Noraisiko ihany koa ny fahalalahana nanova azy kely.
Eo izy, mihobia!
Marina izany marina !! 😀 .. Hadinoko izany hahaha
Mahafinaritra, liana be, misaotra nizara.
Nah fahafinaretana izany, izay no ilainay ... hizara 😀
Ny hafa bebe kokoa ho an'ny lisitra: D!
^ - ^ misaotra
Wallpaper masiaka, misaotra tamin'ny fizarana azy ireo. Manana vitsivitsy tena tsara aho, hataoko ny lahatsoratra. Miarahaba ary misaotra hatrany.
Misaotra anao naneho hevitra. Raha ny marina ... manangona sary an-tsaina sahabo ho 30 an'ny Fedora aho izao, izay fantatro fa adidiko amin'ireo mpanaraka an'ity distro rindrina ity hehehehe.
Eny an-dalana, avy amin'ny openSUSE dia efa napetrako 😀
ReichSk dia hoy izy:
Ry malala, misaotra tamin'ny anjara birikinao, izany ihany ho an'ny manaraka dia tokony ampidiro rohy iray hampidinana ny fonosana iray manontolo, sosokevitra iray avy amin'ny olona te-hisintona azy rehetra fa kamo xD ajja, arahaba.
Mamaly an'i ReichSk
Misaotra KZKG ^ Gaara, efa ananako mandritra ny 2 herinandro 🙂
haha tena tsara misaotra haha
tsara! Raisiko izy rehetra haha ​​...
Ilay miresaka 'Atsaharo ny fanaingoana, manomboka miasa' no avo indrindra haha
Wallpaper mahafinaritra ho an'ny fanangonana ahy! misaotra 🙂
Mahafinaritra ahy ny mandray ny Binary manga sy ny Desktop tsy hita. XD
Jenny Cabrera Varona dia hoy izy:
Sady mahafinaritra! fa nisy bibidia tsy hita hahahahaha ...
Valiny tamin'i Jenny Cabrera Varona
Ny iray amin'ny fijanonana tsy hanaja ny manomboka miasa dia tonga amiko fa tsy nolokoina.
Pablo Bachi dia hoy izy:
Tena tsara! Maka mpivady ho any amin'ny birao sy any an-tranoko aho 🙂
Valiny tamin'i Pablo Bachi
Volana vitsivitsy lasa izay dia nahita ity lahatsoratra ity aho ary nametraka ilay iray momba ny "Atsaharo ny fanaingoana, manomboka miasa". Hatramin'izay dia tsy nanova ny fiafaran'ny birao aho; tsy lohahevitra akory, tsy misy sary masina na inona na inona: D.
Noho izany, avelako ity fanehoan-kevitra ity mba hisaorana fotsiny ilay hevitra sy hanampiako ny vokatra 😛